Toriteny 03 Novambra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 03 Novambra 2013
Ohabolana 16:19–24 / Lioka 6:20–26 / I Petera 4:12-19
« Manantena fahasambarana ny mino »
Raha ny mahazatra, dia ny fahatrarana ny tanjona noheritreretina na ny fahatanterahana eo amin’ny amin’ny fihariana no atao hoe fahasambarana. Andriamanitra ihany koa dia maniry ny Kristiana mba hihaina fiainam-pahasambarana. Inona ary no hevi–dalina raketin’ny Soratra Masina, amin’ity perikopa androany ity manolona izany atao hoe “Manantena fahasambarana ny mino izany”?
1- Fahasambarana manao ahoana ?
Avy amin’Andriamanitra ny tena fahsambarana.
Andriamanitra dia : mitarika ny olona amin’ny tanam-pahasoavany, manolo-tsaina, manampy amin’ny zavtra rehetra. Hany ka tojo am fahasambarana satria tanteraka izay niriny. Izay no atao hoe mahazo fitahiana. Mahazo fanampiana satria voaaro ka tafita amin’ny atao. Izany fahasambarana izany dia TSY MAINTSY MIORINA AO AMIN’ANDRIAMANITRA izay mitondra ny zavatra rehetra.
2- Ny fahasambaran’izay voafidin’Andriamanitra
Raha ny Lioka 6 : 20 – 26 no dinihina dia mifanohitra amin’ny lojikan’izao tontolo izao ny hamaritany ny hoe olona sambatra satria ireo noana, malahelo, mitomany, enjehina, ireny no antsoiny hoe sambatra. Marihina fa ny mino no resahina eto fa tsy ny fahasambaran’ny olon’izao tontolo izao. Ny olona mino dia mila mahatsapa fa mahantra ara- panahy, noana, malahelo noho ny faharatsiana, latsaka ao anaty kizo ny fiainany noho ny fahantrana ara –panahy. Mahatsiaro ho lavitra an’Andrimanitra ka mila an’i Jeso Kristy handray an-tanana sy hanamboatra izany. Izay no antsoina hoe malahelo am-panahy. Ny olona malaelo am-panahy no atao hoe sambatra. Sambatra satria Jesoa Kristy mihintsy no mitantana azy hahatratra Tanjony dia ny hitomboana amin’ny fiainampanahy.
3- Ny tokony ho tandremana
Izaho tsy manao ahy toa ny hoe tanteraka fa manao izay hiazonan’i Jesoa ahy hoy ny Apostoly izay efa voafidy.
Sambatra raha enjehina noho ny fahamariana, diniho ny tantaran’i Paoly sy Silasy. Tsy takatry ny saina ny fitahiana azon’izay voafidin’Andriamanitra. Ny fanenjehana no nitafiany ny voninahintr’Andriamanitra.
Mahantra indrindra izay tsy mihevitra afa tsy ny haren’ny tany. Mahantra noho ny olona rehetra iananareo ra eto amin’izao tontolo izao ihany no antenainareo an’i Kristy.
Lozanareo izay voky, izany hoe tsy miezaka intsony manatratra ny fanjakan’Andriamanitra, fa mianoka am izay efa ananany.
Aza mihevi tena ny hoe efa tanteraka, fa katsaho ny fanjakan’Andriamanitra.
Ny fikarakaran’ny tanan’Andriamanitra ny olom-boafidiny no antoka mitondra ny fahasambarana, tsy tadiavina ny fahasambarana ho an’ny mino fa omena maimaimpoana ary tonga ho azy eo amin’ny fiainana saingy kosa ny fomba ahatanteraka izany dia tsy misy afa-tsy ny faniriam-panahy te hitombo ao amin’Andriamanitra, izany hoe tena manana hetaheta isika handray an’i Jesoa Kristy ho tena fiainana , dia anjaran’Izy Andriamanitra ny sisa. Ny tena fahasambarana dia ny miara-dala amin’i Jesoa Kristy mba hahatanteraka ny fikasana tsara ao anaty ka ny handovana ny fiainana mandakizay.
Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra Amen !
ANDRIANARISON Hajaniaina Célestin , Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 13 novembre 2013